Rasmi: Filimka Badrinath Ki Dulhania Iyo Maalinta Kowaad Lacagaha Uu Gudaha Hindiya Ka Keenay - Hablaha Media Network
Rasmi: Filimka Badrinath Ki Dulhania Iyo Maalinta Kowaad Lacagaha Uu Gudaha Hindiya Ka Keenay
HMN:-Varun Dhawan iyo Alia Bhatt sabab walbo oo ay u dabaal dagaan ayay heestaan madaama filimkooda Badrinath Ki Dulhania maalinta kowaad ganacsi heer sare ah sameeyay.
Sida shabakada Boxoffice India xaqiijisay Badrinath Ki Dulhania maalinta kowaad wuxuuu keenay 12 Crore (Trade Figure) waa lacagahaa ay kasoo xigatay kooxda cajaladaha qeybiyaan iyo kuwa tiyaatarada iska leh.
Dhanka kale Dharma Productions iyo Fox Star Studio oo filimkan iska leh waxay shaaca ka qaadeen maalinta kowaad inuu keenay 12.25 Crore (Producer Figure).
Filimka Badrinath Ki Dulhania lacagaha maalinta kowaad uu keenay wuxuu la mid yahay filimkii Jolly LLB 2 ee Akshay Kumar sameeyay lacagaha uu keenay waana guul weyn ee Varun Dhawan usoo hoyotay.
Badrinath Ki Dulhania lacago fiican ayuu keenay wuxuuna ka ag dhow yahay Varun Dhawan filimkiisii uu kaligiis hogaamiye ka ahaa ABCD 2 balse filimkaas waxaa caawiyay in xili xagaa ah la daawaday waana sababta keentay inuu 2 Crore dheeraado maalinta kowaad.
Badrinath Ki Dulhania ayadoo lagu guda jiro bisha Maarso oo ah bil ganacsiga Bollywood-ka wanaagsaneyn ayuu si wacan ku bilaawday sidoo kalena qarashaad xoogan laguma sameynin waxay ka dhigan tahay in filimkaan guul heer sare ah gaari doono sidoo kalena ma jiro loolan adag ee uu dhawaanahan la kulmi doono.